Imibuzo evame ukubuzwa - Yantai Haicheng Sanitary Products Co., Ltd.
Q1: inkampani yakho imboni? Hlobo luni lwesibulala-magciwane esikhiqizwayo?
Inkampani yethu iyifektri yokukhiqiza, izinhlobo ezidayisa amagciwane ezishisayo yilezi: ama-75% utshwala obulala amagciwane, i-hand sanitizer gel, insipho yesandla elwa namagciwane, ilondolo yokuhlanza, i-mouthwash, i-ejenti yokuhlanza ibhodlela lengane, izithelo nezitshalo zemifino yokuhlanza isibulala-magciwane, okubulala ukudla, isibulala-magciwane esingu-84, i-hypochloric acid disinfectant, isibulala-magciwane sesilwane, i-formaldehyde scavenger, isixazululo sokukhula kwezitshalo, isixazululo sekhwalithi yamanzi, isisusa sokugqwala, ukubambezeleka kwesifutho, amanzi e-beriberi, amanzi we-nail grey, i-bubble bath liquid, i-hair tonic spray, i-metal cutting fluid, i-oyela esindayo, i-ion engeyona amanzi, njll.
Q2: ukusula okumanzi konke kukhiqiza ziphi izinhlobo?
Singakhiqiza ama-wipes angama-75% wet wet wipes, i-alcohol wipes, i-alcohol pad, i-saner wipes sanitary, i-baby wipe, i-kitchen wipes, i-pet wipes, i-mobile phone wipes, i-glasses wipes, ama-wipe abambezelekile, ama-wipe asezimbonini, nokunye. Ingakhiqiza isikhwama esingu-1, isikhwama sezingcezu eziyi-10, isikhwama sezingcezu ezingama-20, isikhwama sezingcezu ezingama-30, isikhwama sezingcezu ezingama-40, isikhwama sezingcezu ezingama-50, isikhwama sezingcezu ezingama-60, isikhwama sezingcezu ezingama-80, isikhwama sezingcezu eziyi-100, Singakhiqiza nesibhaxiwe esingu-60, ibhavu engu-80, ibhavu eli-100 , I-barreled eyi-160, i-barreled eyi-800, i-1200 barreled, Ingabuye ikhiqizwe ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
I-Q3: izinto zokwelashwa namadivayisi wezokwelapha aneziphi izinhlobo?
ikakhulu sithumela izifihla-buso zezokwelapha ezilahlwayo, izifihla-buso zezokwelapha ezilahlwayo, izifihla-buso zezokwelapha (i-N95), okokugqoka okokuvikela okwezokwelapha, okokwehlukanisa impahla kwezokwelapha, izembatho zezokwelapha ezihlinzwayo, amagilavu ​​wokuhlolwa wezokwelapha alahlwayo, amagilavu ​​wokuhlinza wezokwelapha alahlwayo, amakepisi wezokwelapha, izibuko zokuhlukaniswa kwezokwelapha, ukuhlukaniswa kwezokwelapha buso, izembozo zezicathulo zokuzivikela, ama-thermometers ebunzi angaphansi alahlwayo, njll.
I-Q4: ukuminyana kotshwala kwe-disinfectant yotshwala kanye nejeli yokubulala amagciwane engagezi? Utshwala obusetshenzisiwe?
Iningi lempahla ethunyelwa ngaphandle kwe-gel engabulala amagciwane kanye ne-gel engenawo amanzi okugeza ayi-75% yotshwala (i-ethanol), futhi ingenziwa futhi kube yimikhiqizo ehlanganisiwe enezinga eliphakeme lokuvala inzalo ngokusho kwamakhasimende. Utshwala esibusebenzisayo bulinganiselwa ku-75% wokudla.
I-Q5: yini umbala ketshezi lwensipho yesandla elwa namagciwane? Ungakwazi ukwenza igwebu?
Umbala ungaba ngokuya ngezidingo zamakhasimende, amakhasimende ajwayelekile azofuna uketshezi olubonakalayo, angenziwa futhi abe luhlaza okwesibhakabhaka, opinki, oluhlaza okotshani, ophuzi nolunye olubonakalayo. Insipho yethu yesandla elwa namagciwane ingenziwa igwebu.
I-Q6: I-sanitiser yokuwasha isithako esiyinhloko? Ingabe intengo inenzuzo?
isithako esiyinhloko yi-p-chloro-xylene phenol, efanayo nefomula ye-DETTOL, kepha intengo yethu ishibhile.
I-Q7: i-mouthwash, i-ejenti yokuhlanza ibhodlela lengane, izithelo nezitshalo zemifino yokuhlanza i-disinfectant, okokugcina ukudla kunesihlungu emzimbeni womuntu?
Ingxenye eyinhloko ngamanzi e-anion emvelo, afakwa i-electrolyzed kusuka emanzini amsulwa kuya ku-anion ephezulu yokuhlushwa. Inekhono lokuhlanza i-osmotic eliqinile kanye nesilinganiso se-bactericidal, futhi ayinakho ukucasuka emzimbeni womuntu futhi ayinazo izinciphiso.
Q8: Uyini umphumela wemikhiqizo yabantu abadala?
Ingxenye eyinhloko ngamakhambi emvelo, anamandla amakhulu okungena, angangena esikhunjeni iye emthonjeni we-epidermal, umphumela osheshayo, obaluleke kakhulu ngaphandle kwanoma yikuphi ukukhuthazeka nemiphumela emibi emzimbeni womuntu.
I-Q9: yini ukwakheka kwama-wet wipes? yimuphi umsebenzi nokupakisha izesuli ezimanzi eningazenza nonke?
Ukusula okumanzi kunguketshezi oluqinile oluqukethe, kukhiqiza indwangu engalukwanga njengenkampani yenethiwekhi, ngokusho komsebenzi nokusetshenziswa kokuhlukile, engeza iziphuzo ezahlukahlukene. Inkampani yethu ineqembu elinamandla lamakhemikhali e-R & D, ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ukulungiswa kweziphuzo ezisebenzayo ukufeza ukwaneliseka kwamakhasimende. Ukupakisha kungenza izingcezu ezahlukahlukene zezikhwama, imigqomo, amabhokisi noma ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
I-Q10: unikeza insizakalo yokulayisensa? Ingabe kukhona i-oda eliphansi?
Yebo, sinikela ngezinsizakalo zokulayisensa. I-oda elincane liyisitsha se-GP esingu-20.
I-Q11: imikhiqizo yenkampani yakho ingahlangabezana nemithetho yethu yokungenisa nokuthumela ezweni lonke?
Njengamanje, imikhiqizo yethu ithengiswe kahle emazweni amaningi, i-FDA CE MSDS yethu nezitifiketi eziyingozi ziphelele kakhulu, ngakho-ke ungakhathazeki ngokuvunyelwa kwezokuthutha kanye namasiko, imininingwane eyengeziwe, sicela uxoxe nomphathi webhizinisi lethu.
I-Q12: singathenga ngamanani amancane?
Yebo, bonke abahlinzeki bancane futhi bakhulu, ukuhweba phakathi kwalezi zinhlangothi zombili nakho kusuka kwinani elincane lama-oda wokuzama ukuya kwinani elikhulu le-wholesale, sizimisele ukusebenzisana nabaphakeli bomhlaba wonke ukuze sikhule ndawonye.
I-Q13: singathenga ngobuningi?
Vele, ungakhathazeki ngamandla ethu. Uhlobo ngalunye lwethu lungakhiqiza amabhodlela (amasaka) afinyelela ku-100000 + ngosuku, anganikezwa ngobuningi.
I-Q14: Ingathunyelwa isikhathi esingakanani?
Lokhu kuya ngobuningi be-oda lakho. Ngemininingwane engaphezulu, sicela ukhulume nomphathi webhizinisi.